पितृसत्ताविरुद्ध पुरुष पनि लड्नुपर्छ
पितृसत्ताको खास अर्थ पुरुषतन्त्र हो । अर्थात्, पुरुषको सत्ता । यही सामाजिक सत्ता हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । हामी पितृसत्तात्मक चिन्तनले ग्रसित भएको समाजमा छौँ र हाम्रा व्यवहार पनि पितृसत्ताले निर्देशित गरेबमोजिमकै छन् ।
पितृसत्ताका दुई पक्ष छन् । एक संरचनात्मक पक्ष, जसलाई देख्न सकिन्छ र अर्को विचारधारा जसलाई देख्न सकिँदैन तर फैलिरहेको हुन्छ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । संरचनाका कुरा गरौँ । हामी देख्न सक्छौँ पुरुषको अवस्था र महिलाको अवस्थाबीच फरक । घरको मालिक को छ ? परिवारको नाम थर कोबाट राखिन्छ ? सम्पत्तिको मालिक कसलाई मानिन्छ आदि-आदि ।
संरचना हेर्दा घरको मालिक पुरुष हुन्छन्, परिवारको नाम पुरुषकै नामबाट राखिन्छ फलानोको छोराछोरी, फलानोको श्रीमती, फलानोको नातिनातिनी अर्थात् त्यो 'फलानो' भनेको पुरुष हो । थर पनि पुरुषकै थरअनुसार राखिन्छ । बाबुबाजेको थर अनुसार छोराछोरीको थर राखिन्छ । आमाको थरअनुसार राखिँदैन, सम्पत्तिको मालिक/हकदार पुरुष नै हुन्छन् । छोरालाई सम्पत्तिको हकदार मानिन्छ, छोरीलाई मानिँदैन ।
यसरी पितृसत्ताको संरचनामा पुरुष नै मालिक हुन्छन् र यो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ, महिला र पुरुषलाई बराबर हैसियतमा राख्ने संरचना हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । अर्को विचारधारा छ, यो देख्न सकिँदैन तर फैलिरहेको हुन्छ । पितृसत्ताको विचारधाराले पुरुषहरूलाई उत्तम मान्छ र महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्छ । पुरुष उत्तम हुन्छन्, महिलाचाहिँ पुरुषभन्दा निम्न, कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता पितृसत्ताको विचारधाराले राख्छ । जस्तै : गीत सुन्नुहोस्, म्युजिक भिडियो हेर्नुहोस्,चलचित्र हेर्नुहोस् ! महिलालाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ, पुरुषलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको हुन्छ ?
सबै त नभनौँ, प्राय:जसो चलचित्रमा महिलालाई कमजोर तथा निरीह पात्रको रूपमा उभ्याइएको हुन्छ । चलचित्रका दृश्यमा महिलामाथि हमला हुँदा कि त रोएर आत्मसमर्पण गरेको, कि त भागेको अथवा पुरुष आएर बचाएको दृश्य देखाइन्छ । एकदमै दयाको पात्रको रूपमा उभ्याइएको हुन्छ । महिलालाई किन यसो गरिन्छ ? आफूमाथि हमला हुँदा महिलाले प्रतिकार गरेको वा प्रतिकार गर्न खोजेको मात्र पनि किन देखाइँदैन ?
केही महिनाअघि प्रकाश सपुतको सर्वाधिक रुचाइएको गीत 'बदला बरिलै', जसमा एउटी किशोरीमाथि बलात्कार भएको देखाइएको थियो तर किशोरीमाथि हिंसा हुनैलाग्दा उसले प्रतिकार गरेको, भाग्न खोजेको वा प्रतिरक्षामा उत्रिएको दृश्य देखाइएन । नजिक जे वस्तु छ, त्यसैले प्रतिकार गरेको वा प्रतिकार गर्न खोजेको, हिंसा नसहेको दृश्य देखाउन सकिन्थ्यो । तर, देखाइएन, उल्टै डराएर आत्मसमर्पण गरेको दृश्य देखाइयो । यस्तो किन देखाइयो ?
किनभने पितृसत्ताको विचारधाराले हाम्रो मानसिकताम यस्तो नकारात्मक छाप बसाइसकेको छ कि पुरुष बलिया हुन्छन्, जे पनि गर्न सक्छन्, त्यसैले हिंसा गर्छन्, तर महिला कमजोर हुन्छन् र प्रतिकार गर्न डराउँछ्न् अनि हिंसा सहन्छ्न् । पितृसत्ताको विचारधाराले स्थापित गराइदिएको यस्तो मानसिकताका कारण नै गीत, म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा महिलालाई कमजोर देखाइन्छ । यस्ता गीत, चलचित्र हेरेपछि भर्खरका किशोरकिशोरीमा कस्तो मानसिकता बन्ला ?
महिला त कमजोर हुने रहेछन्, पुरुषले चाहे भने जे पनि गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने मानसिकता युवा तथा किशोरहरूमा पर्न सक्छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई हिंसात्मक बन्न अझ प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । नाटक (चलचित्र) समाजको ऐना हो भनिन्छ अर्थात् समाजमा हुने गरेका घटना परिघटनालाई नै चलचित्रमा देखाइन्छ र चलचित्रले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको छाप बसाउन सक्छ ।
छोरीहरू गर्भमै हिंसामा परेका छन् । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ- पितृसत्ता पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि पूर्ण रूपमा मानेका छन् । छोरा र छोरीबीच विभेद पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि गरेका छन् तर त्यसो गर्नुमा महिलाका बाध्यता छन् ।
यदि हाम्रा चलचित्रमा महिलालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने हो भने, महिलाले हिंसा सहँदैनन् भन्ने शिक्षा प्रदान गर्ने खालको प्रस्तुति दिइने हो भने समाजमा केही त सकारात्मक सन्देश पुग्ने थियो तर त्यस्तो कमै मात्रामा भएको छ । पितृसत्तात्मक विचारधारा हाम्रो मनमस्तिस्कमा यसरी बसेको छ कि त्योभन्दा बाहेक हामी अरु केही सोच्दै सोच्दैनौँ, पितृसत्ताको विकल्प हुन्छ है भन्नेमा हामी पुगेकै छैनौँ ।
पितृसत्ताकै कित्तामा महिला पनि !
जातीय, वर्गीय विभेदजस्तै महिलामाथिका विभेद पनि क्रूर र अमानवीय छन् । आमाको गर्भदेखि नै छोरीहरू विभेदमा छन् । छोरा पाउने रहरमा गर्भमा छोरी भएको थाहा पाए छोरीको भ्रूणहत्या गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । पहिलेपहिले छोराको रहरमा धेरै छोरी जन्माउँथे । छोरा नजन्मिएसम्म छोरी जन्माइरहन्थे तर अहिले प्रविधिको विकाससँगै छोरीहरूको जन्मिने अधिकार पनि खोसिँदै छ ।
छोरीहरू गर्भमै हिंसामा परेका छन् । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ- पितृसत्ता पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि पूर्ण रूपमा मानेका छन् । छोरा र छोरीबीच विभेद पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि गरेका छन् तर त्यसो गर्नुमा महिलाका बाध्यता छन् । पितृसत्ताले छोरा खोज्छ, छोरालाई सर्वोपरि मान्छ र पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाले पितृसत्ताको विरुद्धमा गएर छोरी पनि छोराजस्तै हुन्, अझ दयालु हुन्छन्, छोरा पाउने आसमा म गर्भमा छोरीलाई मार्न सक्दिनँ, मेरो कोखप्रति मेरो अधिकार हुन्छ, मेरो शरीरको अधिकार मेरो हो भनेर महिलाले भन्न सकेका छैनन् । किनकि पितृसत्ताले उनीहरूका गला अवरुद्ध गराएको छ ।
दुर्भाग्यवश पुरुषले भन्दा बढी महिलाले नै पितृसत्तालाई मान्छन्, किनकि सन्तानलाई पितृसत्ता सिकाउने जिम्मा महिलामाथि थोपरिएको छ । छोरालाई भावनात्मक रूपमा बलियो हुनुपर्छ, कठोर र आक्रामक हुनुपर्छ भनेर सिकाउने जिम्मा परिवारकै हुन्छ । छोरीलाई कसैको कुनै कुरामा प्रतिवाद नगर, कुनै पुरुषले जिस्काए तिमी चुप लागेर हिँड, प्रतिवाद नगर, किनकि तिमी छोरी हौ, सहनुपर्छ, लोग्नेमान्छे त त्यस्तै त हो नि भनेर लोग्नेमान्छेलाई हिंसात्मक बन्न र महिलालाई हिंसा सहन पितृसत्ताले सिकाएको हुन्छ । तिमी त छोरी मान्छे, यो घरको इज्जत, यस्तो पहिरन लगाऊ, यस्तो नलगाऊ, यस्तो पहिरन लगाए पुरुषहरूको मन बिग्रिन्छ, उनीहरू आफ्नो भावनालाई सम्हाल्न सक्दैनन्, त्यसैले तिमीले यस्ता पहिरन लगाऊ भनेर महिलाको पहिरनको स्वतन्त्रतासमेत खोस्न खोजिन्छ ।
घरबाहिर निस्कँदा जोखिम हुन्छ, एक्लै घरबाहिर नजाऊ । जागिर खान टाढा नजाऊ, बरु जागिरै नखाऊ, घरमै थुनिएर बस भनेर पितृसत्ताले सिकाउँछ । तर, घरभित्रै छोरीहरू असुरक्षित भएको आफ्नै बाबु, दाजु, काकाबाट छोरीहरूमाथि हिंसा भएको कुरा पितृसत्ताले ख्याल गर्दैन र अर्कोतिर महिलाको यौनिकतामाथि पितृसत्ताको नियन्त्रण एकदमै कठोर र भयावह छ ।
बलात्कार हुनु भनेको महिलाको इज्जत जानु होइन, उसको शारीरिक स्वायत्ततामाथि आक्रमण हुनु हो । उसले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार खोसिनु हो, उसको मौलिक हकमाथि प्रहार हुनु हो भनेर कहिले बुझ्ने हाम्रो समाजले ?
महिलाको यौनाङ्गमा उसको इज्जत बसेको हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो एकदमै गलत छ . महिलाको यौनाङ्गलाई इज्जतसँग जोडेर हेर्ने मानसिकताका कारण कति छोरीहरू मृत्युको मुखमा पुगेका छन्, त्यो कुरा हाम्रो समाजले कल्पना गरेकै छैन । त्यस्ता कतिपय यौनहिंसाका घटना सुनिन्छ, जसमा पुरुषले महिलासँग बदला लिनकै लागि बलात्कार गरेको भन्ने सुनिन्छ ।
बदला लिन किन बलात्कार गरेको होला, अन्याय भएको भए उजुरी गर्न सक्थ्यो होला । अन्य तरिकाले सजाय दिन सक्थ्यो होला । एउटा पुरुषले रिस उठेको महिलासँग बदला लिन बलात्कार नै किन गर्छ होला ? किनभने बलात्कार हुनु भनेको महिलाको इज्जत लुटिनु हो, इज्जत जानु हो । महिलाको योनीमा नै इज्जत रहेको हुन्छ । त्यो लुटिएपछि महिलाको जीवन सकिन्छ भनेर पितृसत्ताले सिकाएको छ र पितृसत्ताले सिकाएको कुरा समाजले भनिरहेको छ ।
महिलाको सारा इज्जत उसको योनीमा हुन्छ भनेर सिकाएको समाजमा हुर्किएको पुरुषले कुनै महिलासँग रिस उठ्यो भने बदला लिन बलात्कारजस्तो घृणित कार्य गर्छ । उसको इज्जत पनि जान्छ, आफ्नो बदला पनि पूरा हुन्छ भन्ने मानसिकता पुरुषमा बसेको हुनुपर्छ ।
अब सोचौँ त, महिलाको सारा इज्जत उसको योनी हो भन्ने मानसिकताले कति छोरीहरू हिंसामा परेका होलान्, कति मृत्युको सिकार भएका होलान् । यो विषयमा हामीले कहिले सोच्ने ? बलात्कार हुनु भनेको महिलाको इज्जत जानु होइन, उसको शारीरिक स्वायत्ततामाथि आक्रमण हुनु हो । उसले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार खोसिनु हो, उसको मौलिक हकमाथि प्रहार हुनु हो भनेर कहिले बुझ्ने हाम्रो समाजले ? महिलामाथिको हिंसालाई केवल महिलाका मात्र समस्या हुन् भनेर बस्ने अनि आमा छोरी/बुहारी सुरक्षित भएनन् भनेर चिन्ता गर्नुको अर्थ हुन्छ र ?
पितृसत्ताले महिलालाई ‘मान्छे’ मान्छ ?
हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा रीतिरिवाज पनि पितृसत्तात्मक नै छन् । विवाहमा श्रीमान्‌ले श्रीमतीको सिउँदो रंग्याउँछन् तर श्रीमतीले श्रीमान्‌को गोडा छुन्छिन्, ओहो कति फरक ! विवाहपश्चात् पनि पुरुषको शरीरमा विवाहित भन्ने त्यस्तो केही निसान हुँदैन तर महिलाको सिन्दुर पोते हुन्छ । अझ विवाहपछि महिलाको थर फेरिन्छ । भन्न त श्रीमान् श्रीमतीलाई एक रथका दुई पाङ्ग्रा, एक सिक्काका दुई पाटा भनिन्छ । तर, एक सिक्काका दुई पाटामध्ये एउटाचाहिँ पूजनीय, अर्कोचाहिँ दास कसरी हुन्छ ? एक रथका दुई पाङ्ग्रा एउटाचाहिँ बलियो, अर्को निम्छरो कसरी हुन्छ ?
कि त हामीले भन्ने गरेको कथन गलत छ, कि त हाम्रो व्यवहार नै गलत छ । श्रीमान्‌को मृत्युपश्चात् श्रीमतीको रंगिन पहिरन खोसिन्छ । सेतो लगाउनू, शोक मनाउनू, नरमाउनू, नखुल्नू पतिकै सम्झनामा जीवन बिताउनू भनेर सिकाइन्छ । तर, श्रीमतीको मृत्युुपश्चात् श्रीमान्‌लाई त्यस्तो कुनै बन्धन हुँदैन । श्रीमान् त अघिभन्दा अझ फुक्का हुन्छ । न त उसको रंगिन पहिरन खोसिन्छ, न उसको स्वतन्त्रता । अझ उसलाई समाजले अर्को विवाहका लागि स्वीकृति पो दिन्छ । एउटी स्वास्नी नभई कसरी बसोस् विचरा लोग्नेमान्छे, घर चलाउन अर्को बिहे गर्नैपर्‍यो भन्छ समाजले । ल हेर्नुस् त कति धेरै विभेद, कति धेरै अन्याय ।
पितृसत्तामा पुरुष सुरक्षित छन् ‍त ?
हुन त पितृसत्ताले पुरुषलाई उत्तम मान्छ, पुरुषलाई सर्वोपरि मान्छ तर सर्वोपरि मान्दै मान्दै पुरुषलाई मानव बन्न भन्दा पनि कठोर पुरुष बन्न प्रोत्साहित गर्छ । तँ त छोरा मान्छे, कमजोर त बन्नै हुँदैन, आफ्ना भावना, संवेदनशीलता लुकाउन पर्छ, भावनात्मक कोमलता देखाउन हुँदैन, समाजले खिस्सी गर्छ, कठोर बन्यो भने तिमीलाई समाजले महान् भन्छ, मर्द भन्छ भनेर सिकाउँछ ।
पितृसत्ताले पुरुषको भावनात्मक कोमलतामाथि हस्तक्षेप गर्छ, बन्देज गर्न खोज्छ, भावनात्मक र आर्थिक रूपमा बलियो हुनपर्छ । महिलासरह वा महिलाभन्दा निम्न हुनु भनेको नामर्दीपन हो भनेर सिकाउँछ । यस्तो सिक्दै गएका पुरुषलाई के थाहा, उनीहरूको भावनामा पितृसत्ताले कसरी बन्देज गरेको छ भन्ने कुरा ।
महिलाको यौनाङ्गमा उसको इज्जत बसेको हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो एकदमै गलत छ . महिलाको यौनाङ्गलाई इज्जतसँग जोडेर हेर्ने मानसिकताका कारण कति छोरीहरू मृत्युको मुखमा पुगेका छन्, त्यो कुरा हाम्रो समाजले कल्पना गरेकै छैन ।
के पुरुष भनेका मानव नै होइनन् र ? उनीहरूमा भावनात्मक कोमलता संवेदनशीलता हुँदैन ? उनीहरूको मन हुँदैन ? उनीहरूलाई दुख्दैन ? पुरुष रुँदैनन् ? हुन्छ नि पुरुषकाे पनि मन । पुरुष पनि भावनात्मक रूपमा कोमल हुन्छन् । उनीहरूको पनि मन हुन्छ । उनीहरू पनि रुन्छन् तर पितृसत्तालाई यो कुरा स्वीकार्य छैन ।
पितृसत्ताले उनीहरूलाई आफ्नो भावना पोख्ने, सहानुभूति बटुल्ने, सामान्य मान्छे भएर बाँच्ने स्वतन्त्रता दिएको छैन । लोग्नेमान्छे आर्थिक रूपमा बलियो हुनैपर्छ । महिलासरह वा महिलाभन्दा निम्न हुनु हुँदैन । श्रीमती पाल्न सक्ने हुनुपर्छ, श्रीमतीको कमाइ खाने बन्नु हुँदैन भनेर उक्साउँछ अनि पुरुषहरूको काँधमा ठूलो आर्थिक भार थोपरिदिन्छ, आर्थिक भार उठाउन श्रीमतीको सहयोग लिएमा नामर्दको ट्याग भिराइहाल्छ । यसरी पितृसत्तामा पुरुष पनि पीडित छन् ।
हामीले पितृसत्ताको सट्टा मातृसत्ता खोजेको होइन, पितृसत्ताको विकल्प समानता हुन्छ र हामीले समानता खोजेका हौँ । तर, समानताका लागि पहिले त पितृसत्ताका दुई पक्ष, संरचना र विचारधारा बदल्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो नम्बरमा त हामीले आफ्नो दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ, दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म परिवर्तन सम्भव नै छैन । जस्तैः आफ्ना छोरिचेलिलाई ढाक्ने,उसका यौनिकतालाई ढाक्ने र अरुको छोरीको यौनिकतालाई नङ्ग्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
मञ्चमा सभा सम्मेलनमा महिला अधिकारका बडाबडा कुरा गरेर घरमा श्रीमतीमाथि हिंसा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । र, पितृसत्ताका कारण महिला र पुरुष दुवै पीडित छन्, पितृसत्ता केवल महिलाका लागि मात्र होइन, पुरुषका लागि पनि अभिशाप नै हो । तसर्थ महिला र पुरुष मिलेर पितृसत्ताविरुद्ध लडौँ, पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँ पुरुषहरूविरुद्धको लडाइँ होइन भनेर बुझौँ । पुरुषहरूले पितृसत्ताविरुद्ध लड्न अझ अग्रसरता लिन सके समानता सपनाको फल हुने छैन ।
-तिमल्सिना विवेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, फागुन २३, २०७७, १६:३३:००